Tenga uye Kutengesa Maggot BSF uye Kutengesa Maggot • Yurie BSF
Tenga uye Kutengesa Maggot BSF & Kutengesa sei
BSF Maggot Kutengesa uye Maggot Marketing Method - BSF maggot vachitengesa bhizinesi kana kutenga BSF maggot iro riri ruva kana maggot kune vamwe vanhu veIndonesia achiri chinhu chisingawanzoitiki. Apo iri kunze kwenyika ikoko, bhizimisi iri rave richiitwa kwemakumi emakore. Chinofanira kuchengetwa kana uchitenga BSF mbeu yemaggot ndiyo unhu hwevadzidzisi, vanofanira kutarisa uye kutarisa vasati vatenga maggot BSF.
Kune avo vasingazivi uye vanoziva nzira dzemazuva ano Maggot BSF kukura kunze kwekunhuhwira, mupfungwa dzavo ivo vachiri kuratidzika sevakaipa, vakasviba uye vanonhuwa. kwete kutaura nezvekuuya kwemazana emapukanana gorosi anotakura chirwere chechirwere.
Saka iwe unoda kudzidza kukura kwakanaka kwemagetsi, kuitira kuti mhando dzemhuka dzedenga chete kana BSF dziri purazi rako. Chigumisiro chakanaka, hachina kunhu uye uye ine mari shoma shoma.
Black Sombamba Nhunzi
Kuzivikanwa kune zvakawanda zvinobatsira zvakadai sehove yekudya, huku, zvikara, zvepasi rose remishonga, mapurisa nezvimwe zvakadaro.
Maggot bhizinesi kana iwe wakanyatsotarisa kuti unenge uine hutano hwekuwana mari yakawanda, yekutengesa misika semhuka yekufudza, nhamba yacho inofadza, ingotarisa mhando dzezvikwata zvekudya zvezvipfuwo zvinowanikwa muIndonesia.
Makambani akawanda ekudyisa ndiwo chiratidzo chokuti mhuka inopa bhizinesi inobatsira zvikuru. Kana iwe uchida kutanga bhizinesi iri, unofanira kutanga uziva kuongorora kwebhizimisi.
Kuongorora kweMaggot Business
Mukutsvaga, hongu, inosanganisira mutengo wembeu, kutengesa, marudzi ekudyisa, tsika yemutauro. Chinhu chinonyanya kukosha mubhizinesi iri ndechokuti havafanire kunhuwa uye kuitira kuti vawane purogiramu, mharidzo inofanirwa kuve ichibva mumarara, zviyo zvemhuka kana kuparadza.
Nokuda kwehuwandu hwekuverenga kwekuongorora maggotti kubva kumwero wekutanga kusvika pakukura kwemagota kukura kunogona kuongororwa pano> Kuongorora kweMaggot Kukura Bhizimisi
Sei chibage chingafanira kuve chisina kunaka? Nokuti kana kunhuwa kunokwidza mhezi dzakasvibirira, uye kuva chigadziro chinoratidzwa nemhuri uye inharaunda yakapoteredza.
Nzira yekukuridza maruva asinganzwisisi inoita kuti UYE WAKARADZWA uye WAKUNONYANYA, Wakachengeteka nokuti iwe haugoni kuratidzirwa nemhuri uye kunyaradzwa nokuti bhizinesi rako rinogona kuramba riripo nokusingaperi.
Tarisiro yeMaggot Kukura Bhizimisi
Kune zvakawanda zvinobatsira mukugadzira magotti, rimwe rayo nderokuti kutarisira kuri nyore kwazvo uye kunongotora rimwe kusvika maawa maviri pazuva.
Nokuda kwekutanga kwebhizimisi rino unogona kuzviita sebhizimisi rekutanga kana kuti kukura kwemajidhi maduku. Kubudirira kunogona kuitwa pashure. Kuverenga mari inoda kugadzirirwa inogona kuvhura maggot business business analysis.
Musoro unofanirwa kubudisa maggot hauna maduku, nokuti zvinhu zvekurima uku zvinogona kushandisa zvinosara zvinowanikwa pamba. Nekushanda kwemazuva ose kana mari yekutsika midhijidhi yakanyanya kudhura kunyange yakasununguka.
Sei zvisingadhuri uye zvakasununguka? nokuti zvinoshandiswa zvinonyanya kushandiswa kwemarara, zviyo zvemombe nemarara zvinowanika mune zvakatipoteredza.
Mishonga inowanikwa mune maggot yakazara uye mapuroteni anowanikwawo akareba kwazvo, kuitira kuti inogona kushandiswa seimwe nzira yekudya yemhuka uye yekudya kwemhuka yemhuka kune marudzi ese ehove uye huku.
Zvinotenderera nehutano hunotengwa uye nekuda kwei? Kana kune catfish kana imwe nyama yehove yekudya inosanganisira huku pakati peRP5.000 - Rp9.000 / kg.
Kana iri mbeu pakati peRP10.000 - Rp500.000 / kg, zvichienderana nehutano. musiyano ndiyo muenzaniso wekutarisira. Nzira yekuwana nayo yakanaka yakanaka mbeu inogona kuuya uye kuona maitiro ekubata nawo zvakananga.
Kana kuti nekukumbira mutengesi nezvekutarisira mbeu. Kana muenzaniso wekuchengetedza unongopiwa marara chete, unhu hahufananidzi. Unhu hwakaita sehwu hwakanaka kune hove uye huku hwekukudya. Kwete kushandiswa sembeu.
Sarudza vachengeti vane ruzivo uye vazhinji vanowana LIVE mazano, kwete kungoita mavara kana kunyora zvipupuriro. Sarudza tsanangudzo yepamusoro mbeu inotanga kubudirira kwekugadzira maggot.
Mitengo inowanzoenderana zvakaenzana nehutano, inodhura zvakanyanya kunaka kwehutano. Asi chengetedzawo murimi kutanga!
Nzira yeBFF Magical Marketing
Zvakakosha kune avo vese vanoda kutanga bhizinesi iri, kuti vatange kudzidza kuti vangatengesa sei kukohwa kwemarara. Saka kuti paunotanga chaizvo chaizvo.
Ikurima maggotti eBFF inogona kutengeswa nenzira dzinotevera: * Taridzai zvakananga kuvarimi vehove, nyuchi, zvipembenene uye maitiro. Imwe nzira inobatsira iwe ndeyokuenda zvakananga uye kupa kune varimi munzvimbo iri pedyo. Tora nzira inobatsira pamwe nekubatana.
Semuenzaniso: Kumbira kubatana kwevarimi vanove vane nyika uye vane ruzivo kuchengeta hove, apo maggotti edu anopa. Zvinokurudzirwa kuti chibvumirano ichi kubatanidzwa chive chibvumirano chakanyorwa.
Zvadaro zvakadini kana pasina chekudya chechikafu kana varimi vekukupoteredza vakakupoteredza? Kana iri pedo risingawanikwi, unogona kutengesa iro uchishandisa zvigadzirwa zvemashoko evanhu zvakadai se Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube kana kuita webhusaiti yepaiti.
BSG Marketing Maggot
Kukurudzira Maggot Yenyu Business.
Nyora mberi uchienderera mberi pane zvakasiyana-siyana zvemagariro evanhu, usakanganwa kugarisana nemapoka akabatana nehove uye huku. Neku Facebook unofanira kushandisa sarma yako pachako, tanga peji yebhuku kana peji.
Kukurudzira pa Twitter Accounts
Tinogona kushandisa nyore rubatsiro rwezvemagariro Twitter kukurudzira bhizinesi redu. Asi zviri nani, kunyanya mukutsvaga kuburikidza ne Twitter, gadzirira webhusaiti yekutanga yekutanga. Kana pane zvitsva zvitsva zvakagoverwa kubva pawebsite yatakagadzira.
Promotions pa Instagram Accounts
Mune med SOS iyi inozivikanwa nokuda kwekuvhara kwayo kwepamusoro yakaenzaniswa nekambani ye Facebook, zvichida nokuti pamusana pevanhu Facebook vanoshandisa izvo sechigadziro chekubatana kwevanhu, asi paIndaneti zvinowanikwa mune zvebhizimisi.
Iyi nzira, kunyange zvazvo zvishoma "zvakaoma" asi ibhizimusi redu, asi zvinoguma kwenguva yakareba zvakanaka, kunze kwezvo zvakare sechigadziro chekuwedzera kuvimba kwevanotenga vatengi vebhizimisi ratinoshandisa.
Kana iwe uine rombo, pamwe newebsite yehudhiyo iwe unogona kukwezva vashandi vanobva kune dzimwe nyika, zvekuti ivo vanowanzoronga muhuwandu hwakawanda uye mutengo unogonawo kuva nani kupfuura misika yemunharaunda.
Kuita webhusaiti ikozvino iri nyore uye haina mari, kunyange kana ukashandisa zvivako kubva kuGoogle, zvakadai se blogspot neGoogle ibhizinesi rangu, zvose zviri 100% pasina. Mienzaniso yekusunungurwa kusununguka pa google blogspot
Kukurudzira Nokugadzira Online Store
Iko kune mabasa akawanda anopa kupa mabhizimusi eIndaneti kubva kunotsika kusvika kune iyo yakanyatsonaka. Iwe unongosarudza maererano nebhajari yako. Iyi nzira iri muGoogle type "online shop making services"
Sarudza nokungwarira, vamwe vavo vakanaka, vamwe vanofanirawo kungwarira. Dererai pasi uye mubvunze zvakawanda, bvunza mazano pamusoro pezvipi matanho aunofanira kugadzirira. Usasarudza maitiro avasakwanisi kupa mazano akanakisisa ezvitoro zvekutsvaga zvavanoshanda kwatiri.
Zvimwe Zvikwata Zvokukurudzira
Iwe unogona kushandisa masayiti akaita se OLX, Tokopedia, nevamwe. Vhura mazano ekudzidzisa ma bhizinesi ekurima maggot. Kuti bhizinesi redu rekugadzira rikure nokukurumidza, hurongwa hwedu hunofanirwawo kuva hwekugadzira uye hwakasiyana, humwe hwahwo huri kuzarura basa rekudzidzisa bhizinesi rekugadzira maggot, nei iri zano rakakosha ???
Kuzivisa kuvanhu vose kuti iwe uri mumwe wemabhizimisi ekurima maggot. Nokukudzidzisa bhizimisi rino bhizimisi rako richakurumidza kupararira zvose muguta uye kunze kweguta.
Bhizimisi rako richave rakakurumbira mukurumbira nokuti rakabatsirwa neavo vakapiwa bhizimisi kudzidziswa. shoko remuromo bhizimusi rinokurudzira rinobudirira chaizvo kana richienzaniswa nekusimudzirwa kuburikidza nemasangano.
Inobatsira vamwe. Usanetseka kana vaya vamakadzidzisa vachiri kuramba vachida kushanda bhizinesi rekugadzira Maggot. Zvichida kunyange vadzidzisi vacho vachava shamwari yako zuva rimwe nerimwe. Kubvira kwebhizimisi ichi kuchiri kukuru kwazvo zvichipiwa zvidikanwi zvinowedzera kuwedzera nekugovera zvishoma.
Bhizimisi maitirwo aimbova nechinangwa chekugarisana nevamwe, asi iyo inogona kuve yakasununguka kuva sangano kana bhizimisi yekudzidzisa / kukurudzira mumunda wekugadzira maggot.
Kuzarura kurovedzwa kwebhizimusi rekurima Maggot hakudi kudhura mari, nokuti mukugadzirira iwe wakagadzirira uye unoshanda sekugara. Iwe chete unotsanangura nzira yakarurama uye nhanho, chii chinofanira kuitwa kubvira pakutanga kusvikira pakupedzisira.
Kutengesa Mbeu dzeMaggot
Nzira Yokusarudza Superior & Healthy BSF Maggot Mbeu. Paunosarudza mbeu yemaggot kubereka kana kukura, unofanira kusarudza mbeu dzakakwirira uye dzine utano.
Izvi ndezvokuti mbeu dzakakwirira dzichabereka yakawanda yeutano BSF mabuva / maggots. Nenzira, mbeu dzakasviba dziri mauto mashomanana anobhururuka mbeu dzine zvinhu zvakakwirira, kureva kukwanisa kuratidza chimiro chepakutanga chemubereki uye kuva nehuwandu hwehutano hwehutano kuitira kuti vave nehuwandu hwehupfumi, uye havasi chirwere.
Izvi zvinogona kuonekwa mukukumbira varimi kuti vatarisire uye kuti rudzi rwekudya runopiwa sei mbeu panguva yekuchengetwa kwavo kubva paudiki kuti vave mbeu dze BSF.
Bhuku rinonzi BSF Maggot rakafanana nemamwe mhuka inofanirwa kuwana chikafu chakakwana munguva yekuchengetedza. Wedzerai nutrigot pakutanga kwekugadzirwa kwevhidhiyo inoshandiswa kukurudzira BSF kuti iite pamwe nekuisa mazai.
Kubatsirwa kwembeu yakakwirira
Kubudirira kwekugadzira uye kwete nyore kuurayiwa
Kurumidza kuvhara kuva munhu mukuru BSF / BSF nzizi
Kufa kufa kwemahara
Nhamba ye BSF yai yepamusoro yakakwirira pakati pe500 kusvika 900 magorsi muswe rimwe chete
Une guru uye guru rekukura kwemava kana maggot
Kurwisana nezvipembenene uye zvirwere, kunyanya panguva yechine chikamu chepasi pevhiki
Izvo zvakanakisa zvinhu zveSBF sembeu sepamusoro zvinogona kuchengetwa mazai kana mbeu dzeBSF dzichiparadzirwa.
Nenguva yakajeka paunenge uchitenga BSF mbeu dzinokurudzira dzichaita kuti maruva / magog zvigare zvakanaka gore rose, chinhu chikuru ndiko kukohwa nekukurumidza chete 18 pazuva kupfuura mune zvekare 30 zuva nezuva
Mbeu dzepamusoro dzinoramba dzichirwisana nemamiriro ezvinhu akaoma, uye kunyanya kana ichangobva kuputirwa kusvika kune imwe yevhiki nepamusoro, inoparadzirwa nyore nyore nekuda kwepasi mbeu yekufa, kuwedzera kukurumidza uye kugamuchira tsika dzekurima.
Kana uwandu hwe85% huri kuzadzikisa hukuru hwakanyanya hwerwendo rwuri pamusoro apa, muto wevarwi anobhururuka mbeu anotsanangurwa sepamusoro. Kana iyo isingasviki ne 85% zvinoda pamusoro apa, saka mbeu dzeB BSF dzinotsanangurwa sechinyakare.
Kupa feed yakagadzirwa
Superior mbeu: huru yunifomu huru 2cm
Kuwanda kwenyama: yakaoma
Movement: kushingaira kushanda
Mbeu yemuvara: dema
Roma: hapana kunhuwa